Mogadishu Journal » 2019 » January » 19
Mjournal :-Xaaska iyo aabaha dhalay ninkii isku qarxiyay weerarkii Talaadadii la soo dhaafay lagu qaaday Dhismaha DusitD2 ayaa lagu xirey magaalada Mombasa sida ay sheegeen Booliska dalka Kenya. ahir Khalid oo la sheegay inuu ahaa qofkii isku qarxiyay afaafka hore ee Dhismaha...
Somali National Army (SNA) backed by the international partners on Saturday killed 73 al-Shabab militants and destroyed armored vehicles in southern Somalia, according to state news agency on Saturday. The Somali National News Agency (SONNA) said the joint forces foiled an attack...
Mjournal :-Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre, ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Sheekh Maxamed Ibraahim Cali (Kenyaawi) oo kamid ah culimada Soomaaliyeed, maalahaanna Muqdisho ka weday wacyi-gelin uu bulshada Soomaaliyeed ugu dhiirri...
Ciidamada ammaanka oo gacanta ku dhigay qarax la dhigay Boosaaso
Mjournal :-Ciidamada ammaanka ee Magaalada Boosaaso ee maamulka Puntland ayaa waxa u suurta gashay in ay gacanta kusoo dhigaan Miino la dhigay xaafad kamid ah xaafadaha Magaaladaasi. Gudoomiyaha Gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waceys (Dhedo) oo shir Jaraa’id ku qabtay Boosaaso ayaa...
Mjournal :-Koox hubeysan ayaa waxa ay goor dhaw oo maanta ah ku dileen gudaha Suuqa Bakaaraha gaar ahaan qeybta Daawada Gudoomiye laameed ka tirsan Waaxda Xaawo Taako ee Degmada Howlwadaag. Gudoomiye laameedka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Axmed Maxamed Nuur Abiikar...
Mjournal :-Ciidamada NISA ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen Sarkaal ka tirsan Amniyaadka Al-Shabaab, kaddib howlgal maaliniamdii shalay ka fuliyeen magaalada Muqdisho. Sida lagu qoray barta Twitter-ka NISA ayaa lagu sheegay in howlgal si taxadar leh loo fuliya kaddib lagu soo...
Chicago, Illinois – A judge in the United States has sentenced former white police officer Jason Van Dyke to six years and nine months in prison, plus two years probation, for the 2014 murder of black teenager Laquan McDonald. It is the first time in decades that a police officer...
Mjournal :-Ciidanka xoogga Dalka iyo kuwa Jubbaland ayaa fashiliyay Weerar ay Al-Shabaab ku soo qaadeen fariisimaha hore ee ciidanka ay ku leeyihiin deegaanka Baar-Sanguuni ee gobolka Jubbada Hoose. Inta la xaqiijiyay 73 ka mid ahaa xoogaggii duulaanka soo qaaday ayaa weerarka...
Madaxweyne Trump:”Maanan amrin in Congress-ka been loo sheego”
Mjournal :-Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu iska fogeeyay warbixin lagu sheegay inuu isagu amray qareenkiisii xilligaas, Michael Cohen, inuu been u sheego Kongareeska. Warbaahinta Buzzfeed ayaa waxa ay sheegtay in Mr Trump uu Cohen faray inuu been ka sheego...
Shan ruux oo maxkamad loo soo taagay weerarkii Nairobi
Mjournal :-Booliska Kenya ayaa aqoonsaday mid ka mid ah raggii isku qarxiyay weerarkii Talaadadii la soo dhaafay lagu qaaday Hotelka DusitD2 ee magaalada Nairobi, iyadoo Maxkamad la soo taagay shan ruux oo lala xiriirayo weerarkaas. Ninka isku qarxiyay gudaha DusitD2 ayaa...